Ọdụdọ eletriki: ihe niile ị chọrọ ịma | Network Meteorology
O nwere ike ịbụ na ị hụtụla égbè eluigwe ma ị maghị n'ezie otú o si mee ma ọ bụ ihe ọghọm dị na ya. Dika nkowa ya na National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA, maka acronym ya na bekee), égbè eluigwe bu nke emeputara site na clouddị igwe ojii cumulonimbus na nke na-esonyere àmụmà na égbè eluigwe.
N’isiokwu a anyị ga-akọwa ihe niile gbasara omimi égbè eluigwe. You chọrọ ịma ka esi akpụpụta ha na mmebi ha nwere ike ịkpata? Nọgidenụ na-agụ na ị ga-amụta ihe niile banyere ya 🙂
1 Oké ifufe
2 Nhazi nke égbè eluigwe
3 Ofdị égbè eluigwe
4 Àmụmà na égbè eluigwe
5 Mmetụta ọjọọ na mbibi kpatara
Typesdị ụdị ajọ ifufe a bụ ihe ịtụnanya ihu igwe ihe na-adọrọ mmasị ma na-atụ ọtụtụ ndị bi na ya egwu. Nke a bụ n'ihi na ọ nwere oke ọghọm dị egwu ma na-ebute oke mkpọtụ na-adịghị mma. Na mkpokọta, mgbe oke mmiri ozuzo na-eso ya na oke mmiri ozuzo. Ha ji égbè eluigwe na-ada ụda ma dị mkpụmkpụ abịa. E nwekwara ndị nke glimpsed niile dị na mbara igwe nke obodo.
Mmadụ leruo égbè eluigwe anya, ọ ga-ahụ na ọ na-eme ka à ga-asị na ọ bụ ọdụ ụgbọ mmiri. Nke a bụ n'ihi na igwe ojii dị n'elu dị larịị. Ma ọ bụ na ebili mmiri eletrik nwere ike ime ebe ọ bụla n'ụwa, ọ bụrụhaala na enwere ọnọdụ nke okpomọkụ na iru mmiri dị mkpa.
N'aka nke ozo enwere ihe amara dika oke ifufe. Nke a bụ, ihe ịtụnanya dịka nke akọwara, mana esonyere ọdịda ọdịda nke akụ mmiri igwe ruru otu inch ma ọ bụ karịa. Ọzọkwa, Enwere oke ikuku nke gafere 92,5 km / h. N'oge ụfọdụ ị nwere ike ịhụ mmepụta nke a tonado na-emecha na-ebibi ihe niile na ya ụzọ.
Oké ifufe ndị a na-abịakarị n'oge opupu ihe ubi na oge ọkọchị mgbe chi jiri ma ọ bụ n'abalị.
Nhazi nke égbè eluigwe
Maka ọdịdị ihu igwe nke ịdị ukwuu a na-etolite, achọrọ ọtụtụ iru mmiri, ikuku nke na-arị elu na nke anaghị akwụsi ike, na usoro mbuli nke na-akpali ikuku. Usoro nke etolitere ya bụ ndị a:
Nke mbu, aghaghi inwe ikuku di oku juputara na vapo mmiri.
Ikuku ahụ dị ọkụ na-ebili, mana ọ na-adị ọkụ karịa ikuku gbara gị gburugburu.
Ka ọ na-arị elu, okpomoku o nwere sitere n’elu ụwa gaa n’ọkwa kachasị elu nke ikuku. Alulu mmiri na-ajụkwa oyi, na-akụkọta ma ọ bụ mgbe ahụ ka ígwé ojii malitere ịmalite.
Igwe ojii dị n’elu dị jụụ karịa akụkụ ala, yabụ alụlụ mmiri dị n’elu wee ghọọ ụyọkọ ice na-aga n’ihu.
Okpomoku di n’ime igwe oji bidoro bawanye na obuna ime kariri. N'otu oge ahụ, ifufe oyi na-esi n’elu igwe ojii na-efe.
N'ikpeazụ, ifufe na-efe ma na-akụda ọtụtụ ice n'ime ígwé ojii ahụ. Nsogbu dị n'etiti iberibe ahụ bụ ihe na-emepụta ọkụ ọkụ nke na-awụlikwa elu ma mepụta mpaghara nwere nnukwu ụgwọ eletriki. Ọ bụ nke a nke mechara pụta dị ka àmụmà.
Ofdị égbè eluigwe
N'ihi na ọ bụghị naanị otu ụdị égbè eluigwe. E nwere ụdị dị iche iche dabere na ọzụzụ ha na usoro ha. Anyị na-achikota ụdị ebe a:
Mkpụrụ ndụ dị mfe. Ndị a bụ ajọ ifufe nwere obere oge. Ha nwere ike imepụta oke mmiri ozuzo na àmụmà.
Multicellular. Ha nwere mkpụrụ ndụ abụọ ma ọ bụ karịa. O nwere ike ịnọ ọtụtụ awa ma nwee ike iwepụta oke mmiri ozuzo yana akụ mmiri mmiri, ifufe siri ike, oke ebili mmiri na ọbụna idei mmiri.
Squall ahịrị. Ọ bụ usoro siri ike ma ọ bụ dị nso na ahịrị siri ike nke oke ifufe na-eso oke mmiri ozuzo na oke ikuku siri ike. Ọ dị n’agbata kilomita iri na iri na asatọ n’obosara (kilomita iri na isii ruo iri na atọ na otu).
Arc nkuzi. Typedị ofdị mmiri ozuzo a na-adabere n'ụda radar nkuzi nke arc. Ifufe na-etolite n'ahịrị kwụ ọtọ n'etiti.
Ntughari. Mkpụrụ ndụ a na - ejigide mpaghara mmegharị oge niile. Ọ na-ewe ihe karịrị otu elekere ma nwee ike ibute oke ebili mmiri na-eme ihe ike.
Àmụmà na égbè eluigwe
Otu n’ime ihe ịtụnanya nke na-ewere ọnọdụ n’oké mmiri ozuzo bụ àmụmà. Igwe ọkụ na-egbu ọkụ bụ obere ọkụ eletrik na-eme n'ime igwe ojii, n'etiti igwe ojii na igwe ojii, ma ọ bụ site na igwe ojii ruo n'otu isi ala. Maka ogwe ka ọ ghara ịkụda ala, ọ ga-ebuli ya elu ma ọ ga-enwerịrị ihe ga-adị iche na ndị ọzọ.
Ike nke àmụmà ji otu puku ugboro karịa nke anyị nwere n'ụlọ ugbu a. Ọ bụrụ na anyị nwere ike ịbụ nke a na-akwụ ụgwọ eletrik site na nkwụnye ihe nkwụnye, chee echiche ihe ọkụ nwere ike ịme. Ma yensusuw akwan abiɛsa a yebetumi afa so ada ɔdɔ a ɛte saa adi no ho. Nke a bụ n'ihi na ogologo oge nke osisi ahụ dị mkpụmkpụ, ya mere, ike ya anaghị egbu egbu.
Ha bụ ụzarị nke nwere ike ịgbasa n'ihe dị ka kilomita 15.000 kwa elekere ma tụọ ihe dị ka otu kilomita kilomita. Edere ihe ọkụ ọkụ dị kilomita ise n'ogologo oke oke ifufe.
N'aka nke ozo, anyi nwere egbe. Gbè eluigwe bụ mgbawa nke na-eme ka ọkụ eletrik na-enwe ike ịtọ ụda ogologo oge n'ihi nkwughachi nke na-adị n'agbata igwe ojii, ala na ugwu. Igwe ojii na-ebuwanye ibu ma na-agbasikwu ike, nnukwu ụda ahụ na-eme n'etiti ha.
Ebe ọ bụ na àmụ̀mà na-agba ọsọ ọsọ karịa ọsọ ọsọ, anyị na-ahụ àmụ̀mà tupu anyị anụ égbè eluigwe. Otú ọ dị, nke a na-eme n'otu oge.
Mmetụta ọjọọ na mbibi kpatara
Dị meteorology nke ihu igwe na-ebute ọtụtụ mmebi. Ọ bụrụ na ha adịgide ruo ogologo oge ha nwere ike ibute idei mmiri. Ifufe naanị na-enwe ike ịkwatu osisi na ihe ndị ọzọ buru ibu. Ọtụtụ oge, ọkụ ọkụ na-akwụsị n'ihi mmebi nke ahịrị ike.
Mgbe oke mmiri ozuzo dara, ụlọ nwere ike ibibi n'ime nkeji ole na ole.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ebili mmiri eletrik bụ ihe ịtụnanya dị oke egwu nke ị ga-agbaba.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Oké ifufe
Ekele, nkọwa na-adọrọ mmasị, banyere oke ebili mmiri, agbanyeghị m chọrọ ịkọrọ gị, na na mba m Ecuador na kpọmkwem na Manabí, mpaghara dị n'ụsọ oké osimiri, oké ifufe eletrik na-erukwa, na nke kachasị na igwe ojii na-etolite, enweghị akpụrụ mmiri, ma ọ bụrụ na ọ bụghị na mmiri ha nwere nwere obere microscopic nke mmiri, na dịka anyị maara mgbe ha na-agbakọ ha na-etolite nnukwu tụlee na-adọba. Ikekwe na mpaghara nke Sierra nke mba m, a na-akọwakwa oké ifufe eletrik nke ọma, n'ihi na ọ bụ oyi ma ọ bụrụ na enwere snow. Daalụ.